11 July – Maalinta Dadyowga Caalamka. | HimiloNetwork
Posted by: Zakariya in Wararka July 17, 2017	0 418 Views
Muqdisho (Himilonews) – Maalinta Caalamiga ee Dadyowga taas oo raadisa inay diiradda saarto dardar-gelinta ah iyo muhiimadda xaaladaha dadyowga waxaa markii ugu horreysay dhistay Guddi QM u qaabilsanaa horumarinta barnaamijyada sanadkii 1989. Taniyo markaasna, Maalintan waxaa loo asteeyey 11 July sanad kasta in looga dabaal-dego in ka badan 90 dal.
Previous: Xaflad Xiritaan oo loo qabtay Ardaydii ka qeyb-gashay Tartankii Qur’an Aqris.
Next: 15 July – Maalinta Caalamiga ee Xirfadaha Dhalinyarada.
Donald Trump oo loo magacaabay abaalmarinta Nabadda ee Noble Peace.
Casri Maxaabiistu ay Magac kaliya Wadaagaan!
La kulan: Ninka – si uu u helo Shaqo iyo Lammaane cusub – doonaya inuu Da’diisa ka dhimo 20 sano!
Nigeria – Hooyo cunugeeda ku iibsatay Mooto!